ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးပေါင်ကျခြင်း - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း » မိခင်ကျန်းမာရေး » ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးပေါင်ကျခြင်း
ရေးသားသူ Dr. Su Sandy ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe.
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် သွေးပေါင်ကျခြင်းသည် ရှားပါးသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပေ။ သွေးပေါင်ကျခြင်းတွင် တွေ့ရသည့် လက္ခဏာများသည် ပုံမှန်အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်သည်နှင့်တူတူသာဖြစ်ပြီး ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုင်ရာမှရုတ်တရက်ထလိုက်လျှင် ပိုဆိုးတတ်သည်။ ထိုသို့ရုတ်တရက်မူးသွားခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးအမီးအတွက် အလွန် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ အောက်ပါတို့သည် သွေးပေါင်ကျခြင်းကို ဆေးမသောက်ပဲ သဘာအတိုင်း သက်သာအောင်ပြုလုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်း ငါးမျိုးဖြစ်ပါသည်။
သွေးပေါင်ကျခြင်းကြောင့် ခေါင်းမူးခြင်းကို သက်သာစေရန် သင်ရှိနေသော အနေအထားပုံစံပြောင်းလဲသည့် အခါ ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားသင့်သည်။ မနက်အိပ်ရာမှ ထလျှင်အသက်ကို၀၀ရှူသွင်း ပြီးမှအိပ်ရာမှထပါ။ သင်အိပ်နေသော ပုံစံသည် သွေးပေါင်ကျခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အရေးပါပါသည်။ အိပ်သည့်အခါ ခေါင်းကို နည်းနည်းမြင့်ထားခြင်းဖြင့် မြေဆွဲအားကို ဆန့်ကျင်နိုင်သည်။ ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်နိုင်ရန် ခေါင်းအုံးပျော့ပျော့အုံးပါ။ မတ်တပ်ရပ်သည့်အချိန်တွင် မူးသွားလျှင် ခြေထောက်ကို ခုံတစ်ခုပေါ်တွင်တင်ပြီး ကိုယ်ကိုအရှေ့သို့ ကိုင်းထားပါ။ သို့မဟုတ် ပေါင် ကို ကပ်ကြေးကဲ့သို့ လိမ်ပြီး ညှစ်ထားပါ။ ထိုပုံစံသည် ခြေထောက်မှ သွေးကို နှလုံးသို့ ပြန်စီးစေရန် အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ရေ များများသောက်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်သော အစားအစာကို စားပါ။
ရေသောက်ခြင်းသည် သင့်ကို ရေဓာတ်ထိန်းပေးနိုင်ပြီး သွေးပေါင်ကျခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်စေနိုင်သည်။ ရေသည်သွေးပမာဏကို များစေပြီး ခေါင်းမူးခြင်းမှ ကာကွယ်စေသည်။ ထို့အပြင် အရက်သောက်ခြင်းသည် သွေးပေါင်ကျစေပြီး ကလေးအတွက်လည်း မကောင်းသဖြင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာများပါဝင်သော အာဟာရစားသောက်မှုပုံစံကို ပြုလုပ်သင့်သည်။
အစားစားပြီးချိန်တွင် သွေးပေါင်ကျခြင်းကို ကာကွယ်ရန် တစ်နေ့လျှင် အစားကို နည်းနည်းဖြင့် အကြိမ်ရေများများ ခွဲစားပါ။ ဆရာဝန်မှ ဆားအနည်းငယ်ထည့်စားရန် ပြောသော်လည်း သင်အငံမကြိုက်လျှင်ပဲပိစပ်မှရသော သဘာဝ အရသာများကိုရောစပ်စားသုံးပါ။ ထို့အပြင် အစားနှင့် လက်ဘက်ရည်၊ ကော်ဖီတို့ကို တွဲစားလျှင် သွေးပေါင်ကျခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ သို့သော် ကဖင်းပါသော အရည်များကို မသောက်ခင် သင်နှင့် တည့်၊ မတည့် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် သင့်ခန္ဓာကိုယ် ပြောင်းလဲသကဲ့သို့ သွေးပေါင်ချိန်လည်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကိုယ်ကာယ လှုပ်ရှားမှုရှိခြင်းဖြင့် ဆေးမသောက်ပဲ သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိနိုင်ပါသည်။ နေ့စဉ်စားသောက်မှုပုံစံကိုလည်း သေချာစွာထိန်းညှိခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးကို ကျန်းမာစွာကြီးထွားလာစေပါသည်။
Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုချက်များနှင့် ကုသမှုများမပြုလုပ်ပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း – နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်တွေကို ထိခိုက်နိုင်သလား
အိမ်သုတ်ဆေးငွေ့က ကိုယ်ဝန်ဆောင်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် မည်သို့ ပြောင်းလဲပါသနည်း
Low Blood Pressure During Pregnancy.
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=167166. Accessed December 26, 2016.
Low blood pressure in pregnancy.
http://www.bounty.com/pregnancy-and-birth/pregnancy/pregnancy-other-conditions/low-blood-pressure-in-pregnancy. Accessed December 26, 2016.
Blood pressure in pregnancy.
http://www.babycentre.co.uk/a554818/blood-pressure-in-pregnancy. Accessed December 26, 2016.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မူးဝေခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်သိသင့်သော အချက် ၃ ချက်